आजको तस्वीर : धौलागिरी अन्चल अस्पतालको फोहोर ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : धौलागिरी अन्चल अस्पतालको फोहोर !
२०७५ माघ २६, शनिबार ०७:४५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ माघ २६ । धौलागिरी अन्चल अस्पताल बागलुङ बेलामौकमा चर्चामा आईनै रहन्छ । अस्पतालमा दक्ष चिकित्सकको अभाव, बिरामीको उपचारमा लापर्बाही, जेष्ठ नागरिकहरुप्रति सद्व्यवहारको अभाव, निशुल्क औषधि वितरणमा कैफियत, प्रशासनिक अपरिपक्कता, चिकित्सकहरुबीचको सौहार्द्रता आदि विषयलाई लिएर नागरिक समाजमा हुनेगरेको टीकाटिप्पणीहरु अस्पतालको विशेषता बनेको छ ।
धौलागिरी अन्चल अस्पताल उद्घाटन गरिएको वषौँ बित्दापनि अस्पतालको भवन अहिले सम्म निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र रहनु पनि यसको अर्को विशेषता बनेको छ । चिकित्सकहरुलाई काम गर्ने स्थानाभाव छ तर अस्पतालका भवनहरु वर्षौँ देखी अलपत्र रहँदा बिरामीहरुलाई प्रबाह गरिने सेवा समेत प्रभावित बनेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति र अस्पताल प्रशासनबीच सुमधुर सम्वन्धको खाँचो बिद्यमान छ ।
मानव स्वास्थ्य र सरसफाई बीच अन्योन्यास्रित सम्वन्ध रहेको हुन्छ । त्यसैले अस्पतालको आन्तरिक एवं बाह्य सरसफाई अति आवश्यक मानिन्छ । अस्पताल परिसर दुर्गन्धित बनेमा उपचार गर्न आउने रोगीहरुमा पर्न सक्ने दुष्प्रभाव प्रति अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन पक्ष सजग रहनु जरुरी हुन्छ । अस्पताल हरदम सफा गरिनु पर्छ । यसलाई अस्पताल प्रशासनले रत्तिभर हेलचक्राँई गर्न हुन्न । अस्पतालको बाह्य भाग मात्र नभएर आन्तरिकरुपमा पनि अस्पताल चुस्तदुरुस्त रहनु नितान्त जरुरी छ ।
उपचारलाई लिएर बिबादमा आईरहने धौलागिरी अन्चल अस्पताल पछिल्लो समय सरसफाईलाई लिएर चर्चामा आएको छ । अस्पतालमा रहेका शौचालयहरु, बिरामी राखिने कोठाहरु, उपचार कक्षहरु कति सफा छन्, अस्पताल कम्पाउण्ड (परिसर) को सरसफाई अस्पताल प्रशासनले हेर्ने कुरा हो । सरसफाईका लागि कर्मचारीहरु राखिएको हुन्छन । सरसफाई भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्य प्रशासन र व्यवस्थापनको हो । तर धौलागिरी अन्चल अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन बाह् संघसंस्थाले गरिदिनु पर्ने अवस्था रहेको सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी केन्द्र बानपा ३ गुठीले शुक्रबार अस्पताल परिसर सरसफाई गरिदिएको घटनाले देखाएको छ ।
सामान्य हेर्दा एक सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी केन्द्रले अस्पताल परिसरको सरसफाई गरेर सामुदायिक उत्तरदायित्व निर्बाह ग-यो भन्ने बुझिएला, तर यस्लाई गम्भीरता पूर्वक सोँच्ने हो भने, अस्पताल व्यवस्थापन एवं प्रशासन प्रति यसले सकारात्म सन्देश भने पक्कै दिएको छैन । अस्पताल सरसफाईमा जम्मा भएको फोहोरको डुंगुरले त अस्पताल, सरसफाई प्रति बिल्कुल सम्वेदनशील छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । फेसबुकमा अपडेट गरिएका तस्वीरहरुमा अस्पताल सरसफाई गर्न आएको समुहसंग टाँसिएर तस्वीर खिचाउन लाज नमान्नु पनि धौलागिरी अन्चल अस्पतालको नयाँ विशेषता बनेको देखियो ।
तस्वीर साभार : फेसबुक ।